Dutchtown Main Streets • DutchtownSTL.org သို့ လှူဒါန်းပါ။
ရန်အလှူရှင်ဖြစ်လာ Dutchtown ပင်မလမ်းများ! ဒေါ်လာတိုင်းသည် Dutchtown Main Streets ကိုကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သူများ၊ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက်အောင်မြင်သော Dutchtown တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည်။
Dutchtown Main Streets များသည်လည်းယခုပြုလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးနေသည် လစဉ်အလှူငွေများထပ်တလဲလဲ! “ ရေရှည်တည်တံ့သောလှူဒါန်းမှု” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သောငွေပမာဏကိုလစဉ်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Dutchtown Main Streets သည် 501(c)(3) အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လှူဒါန်းမှုသည် အခွန်နုတ်ယူနိုင်သည်—သင်၏အခွန်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Dutchtown Main Streets 'Work အကြောင်းဖတ်ပါ
၂၀၂၀ တစ်လျှောက်လုံးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါတစ်ခုရှိနေသော်လည်း Dutchtown Main Streets သည်အရှိန်အဟုန်သစ်ရခဲ့ပြီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအသစ်များကိုဆွဲဆောင်ကာကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအသိုက်အ ၀ န်းကိုပံ့ပိုးရန်နည်းလမ်းသစ်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သော Dutchtown ကိုဆက်လက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်နှစ်ဖတ်ပါ or PDF ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ.
မင်းရဲ့အလှူကိုစာပို့ချင်ရင်မင်းပေးရတဲ့ချက်လက်မှတ်ကို“ Dutchtown Main Streets” ကိုအောက်ပါလိပ်စာသို့ပို့ပါ။
Pay@pt2stl.org သို့ငွေပို့ခြင်းဖြင့်သင်သည် PayPal မှတိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းမှတစ်ဆင့်လှူဒါန်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအပိုဆောင်းအခကြေးငွေမှသက်သာစေသည်။
သင်လှူဒါန်းရန်အခြားအစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အဆင်ပြေပါတယ်! မင်းရဲ့အကူအညီကိုငါတို့တကယ်ပဲသုံးနိုင်သည်။ ကူညီရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဖြင့်ဖြစ်သည် ကော်မတီတစ်ခုသို့ဆက်သွယ်ခြင်းသင်၏အကြံဥာဏ်များ၊ တုန့်ပြန်ချက်များနှင့်စွမ်းရည်များထည့်သွင်းနိုင်သည့်နေရာ။ သင်၏အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုဖြည့်ဆည်းရန်အခြားနည်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့နေရာချကြမည်။
ယခင်က DT2 ဟုလူသိများသည်
သင် DT2 သို့လှူဒါန်းခဲ့ပါကစိတ်မပူပါနဲ့ Dutchtown Main Streets သည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်နာမည်အသစ်နှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်မွမ်းမံနေစဉ်တွင်အချို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်ရှင်းတမ်းများသည် DT2 နာမည်ကိုထင်ဟပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် မတ်လ 8th, 2022 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown Main Streets သို့လှူဒါန်းပါ